Avira အခမဲ့ Android ကိုလုံခြုံရေး | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » Avira အခမဲ့ Android ကိုလုံခြုံရေး
Avira အခမဲ့ Android ကိုလုံခြုံရေး APK ကို
Avira Antivirus ကိုလုံခြုံရေး: သင်ကအကောင်းဆုံးအခမဲ့ antivirus ကို, မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး, privacy ကို, နှင့် Android များအတွက် anti-theft app ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သင်၏ဓါတ်ပုံများ, အဆက်အသွယ်အီးမေးလ်များနှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်တွေကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာရှိပါတယ်။ ယိုစိမ့်သောဤခေတ်၌, Avira Antivirus ကိုလုံခြုံရေးဖုန်းရဲ့ contents တွေကို (အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Data) လုံခြုံနေဖို့ကြောင်းသေချာ။ malware များ / spyware တွေရဲ့ဖယ်ရှားရေးများအတွက်အခမဲ့ antivirus ကို app ကိုထက်ပိုမိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Full-featured အခမဲ့မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး app ကိုသင်၏အပျောက် / အခိုးခံရစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ကိုခြေရာခံများနှင့်တွေ့ရှိရန်အန္တရာယ်ကင်း browsing နဲ့ဝေးလံခေါင်သီ Anti-ခိုးယူ features တွေပေးစွမ်းသည်။
DigitalTrends ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: "သင်သင့်ရဲ့ Android စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet လုံခြုံစောင့်ရှောက်ဖို့ Avira ရဲ့အခမဲ့ဗားရှင်းယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကြော့မော့သောရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦးအလင်းခြေရာရှိပါတယ် ... "(ထိပ်တန်း5က Android လုံခြုံရေး Apps ကပ, DigitalTrends.com)
Avira Antivirus Security - အဓိကအင်္ဂါရပ်များ
• spyware နဲ့ malware တွေကိုဆန့်ကျင် Shields သင့်ရဲ့ Device များ (စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, phablet)
•လမ်းကြောင်း, သင်တွေ့ကူညီပေး, သင်၏ပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်ခိုးယူဖုန်းကို recover
•ပြိုပျက်ရာနှင့်ခိုးမှုမှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာနှင့်ပုဂ္ဂလိကဒေတာ (ဓာတ်ပုံများ, ချတ်, အီးမေးလ်များ, etc) ကအကာအကွယ်ပေးတယ်
•သင့် apps များအသီးအသီးအထိခိုက်မခံဒေတာစုဆောင်းပုံကိုဖော်ပြပေး
•သင့်ရဲ့ device ပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့အခြားအက်ပ်မှလုပ်ကွက်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်
Top-rated အခမဲ့မိုဘိုင်းလုံခြုံရေးနှင့် antivirus ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတူ 2017 အတွက်, spyware, Trojan ဗိုင်းရပ်စ်များ, နှင့် malware ၏အခြားအမျိုးအစားများကိုဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ contents တွေကို Secure ။
•အလိုအလျောက်ဝှက်ထား malware ကိုများအတွက် apps များနှင့်၎င်းတို့၏ updates များကိုစစ်ဆေးပြီး
•စကင်ပြင်ပသိုလှောင်မှုယူနစ် (ဥပမာ SD ကမှတ်ဉာဏ်ကဒ်များ)
•တစ်ဦးသီးသန့်တည်ရှိမှုစကေးအပေါ်တစ်ဦးချင်းစီ app ကိုနှုန်းထားများကစုဆောင်းဘယ်လောက် data တွေကိုအညီဘယ်လိုဖော်ပြပေး
အဝေးမှက lock, မြေပုံပေါ်တွင်သင်၏ဖုန်းရဲ့တည်နေရာကိုအတိအကျရှာရန်နှင့်လိုအပ်ပါက, သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖျက်ပစ်ပါမည်။ အရှုံးဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်စေရန်, သငျသညျကယျြသောအသံသည်ကိုသက်ဝင်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုတွေ့သူမည်သူမဆိုတစ်ဦးမက်ဆေ့ခ်ျကိုပြသနိုင်တယ်။
• (ဆိုဖာကူအတွက်နက်ရှိုင်းသောဥပမာ) device ကိုနေရာချထားရန်ကျယ်သောဥဩအစပျိုးလိုက်ခြင်း
•မြေပုံပေါ်တွင်သီချင်းများရဲ့ဖုန်းတည်နေရာ (USA တွင် '' ဆဲလ်ဖုန်း tracker တွင် 'တခြားနေရာ' 'မိုဘိုင်း tracker တွင်')
သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့•သော့ခတ်သတ်မှတ်ထားသော apps များ
•အဝေးမှသော့သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ privacy secure ဖို့စက်ကိရိယာမှတ်ဉာဏ်ရှင်းလင်းပေးမှာ
Identity အကာအကွယ် & အမည်ပျက်စာရင်း
သင့်အီးမေးလ် hacked သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ခိုးယူခဲ့ကြခြင်းအလိုငှါသက်ဆိုင်ရာ? အထောက်အထားအကာအကှယျသောအမှုဖွင့်လျှင်သင်ပြောထားသည်နှင့်သင်သည်သင်၏အဆက်အသွယ် '' အီးမေးလ်များအဖြစ်ကောင်းစွာလုံခြုံရှိမရှိသိကြပေးနိုင်ပါတယ်။
•စစ်ဆေးပေးပါသည်သင်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ် '' အီးမေးလ်လိပ်စာများတစ် 3rd ပါတီလုံခြုံရေးဖောက်ဖျက်မှုအတွက်ပေါက်ကြားခဲ့ကြပါလျှင်
web-based စီမံခန့်ခွဲရေး Portal
Web-based ထိန်းချုပ်မှု (မြေပုံပေါ်တွင်လမ်းကြောင်းတည်နေရာသုတ်မှတ်ဉာဏ်, ဥပမာဥဩ) သင်တို့ရှိသမျှသည်သင့်လုံခြုံရေးဆက်တင်များနှင့်ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ functions မှဝေးလံသော access ကိုပေး
•အ web-based ပေါ်တယ်မှတဆင့်မျိုးစုံ devices များ (Cross-platform) ကိုကြီးကြပ်
•ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်တားဆီး, ငါတို့က App Lock ကိုနှင့်အတူအထိခိုက်မခံသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိက apps များ Secure
အင်္ဂလိပ်, ဂျာမန်, ပြင်သစ်, ဒတ်ခ်ျ, အီတလီ, စပိန်, ဘရာဇီးပေါ်တူဂီ, ရုရှ, ပိုလန်, တူရကီ, ကိုးရီးယား, ဂျပန်နှင့်တရုတ် (ရိုးရှင်းသောနှင့်ရိုးရာ) ။
အန်းဒရွိုက် 2.2 - 7
Avira Antivirus ကိုလုံခြုံရေး (Samsung, Lenovo က, Huawei က, LG Sony က, TCL, Coolpad, ZTE သည် Acer, Asus, တိုရှီဘာအပါအဝင်) အများဆုံး Android စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်များနှင့် phablet အပေါ်အသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်။
မှတ်ချက်: လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းကို SMS မက်ဆေ့ခ်ျကိုအန်းဒရွိုက် v4.4 "Kit-Kat" device များအတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
PRO GET! - Premium VERSION (In-app ကိုဝယ်ယူမှတဆင့်)
အပိုဆောင်း browser ကိုလုံခြုံရေး - လုပ်ကွက် browser ကိုအဆင့်မှာဝက်ဘ်ဆိုက်များကူးစက်နှင့် phishing ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေး
ပိုများသော-မကြာခဏမွမ်းမံမှုများ - သင့်ကာကွယ်မှုအသစ်က '' သုညနေ့ '' ကို malware မျိုးကွဲဆန့်ကျင်သည်အမြဲတမ်း up-to-date ဖြစ်အောင်ရှိခြင်းကိုသေချာစေသည်
ပရီမီယံထောက်ခံမှု - လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူများက၏ Avira ရဲ့အဖွဲ့ထိပ်တန်းထစ်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုပူဇော်
- ပိုမိုကောင်းမွန်သော-စည်းရုံးရလဒ်များကိုအမျိုးအစား (Riskware ဖြည့်စွက်)
- ထောက်လှမ်းတိုးတက်လာဖို့ Scanner updates များကို
သငျသညျ Avira Antivirus ကိုလုံခြုံရေးကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, ခဏယူပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သိစေပါ။
သင့်ရဲ့ Avira ရေးအဖွဲ့
Avira Antivirus ကိုလုံခြုံရေး
11.73 ကို MB
ဧပြီလ 12, 2015 မှာ 3: 42 နံနက်
နိုဝင်ဘာလ 1, 2014 မှာ 9: 23 ညနေ
သြဂုတ်လ 30, 2014 မှာ 12: 42 ညနေ
ဇွန်လ 19, 2014 မှာ 7: 52 နံနက်
ဧပြီလ 19, 2014 မှာ 8: 16 နံနက်
ကျေးဇူးတင်စကားတွေအများကြီးဖွင့်အရင်းအမြစ်များအတွက် ... ငါမင်းကို5ကြယ်ပွပေးလိမျ့မညျ! admin..and appsapk.com ရန်။ ဆက်လက်ပြီးရှိသည်။! ပိုပြီး .. များနှင့်အခမဲ့ .. လာမှနောက်ထပ် app! =: D
ဧပြီလ 1, 2014 မှာ 10: 17 ညနေ
(ESET, Avira, Norton, ... ) ဟာ android တို့အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ဆန့်ကျင်ဗိုင်းရပ်စ်ပါသလဲ
မတ်လ 26, 2014 မှာ 6: 23 နံနက်
tina rachman says:
မတ်လ 22, 2014 မှာ 9: 58 ညနေ
ဒါကြောင့်ရိုးရိုး yes..its လွယ်ကူဒေါင်းလုပ် .. ချစ်ခြင်းမေတ္တာဦး appsapk.com
ဇူလိုင်လ 24, 2014 မှာ 4: 52 ညနေ
ဟုတ်ကဲ့ကိုယ့် wow " '" "" "" "wow ကကြိုက်တယ်
မတ်လ 21, 2014 မှာ 9: 13 ညနေ
ဆည်ကျေးဇူးတင်စကား ok ... ဒီ antivirus ကိုသုံးပြီးပြီးနောက် replied ...
အီဘရာဟင် khan says:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2014 မှာ 5: 22 ညနေ
ဒီ site ၏ဒေါင်းလုတ်ဆွဲအလွန်ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကဒီ site.every ကြောင့်တူသောသူတဦးကိုကြိုက်တယ်။
Forkor သြဂတ် says:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 14, 2014 မှာ 9: 14 ညနေ
အစဉ်အမြဲငါမြင်ကြပြီအကောင်းဆုံး android site ကို။
jack ကို says:
နိုဝင်ဘာလ 4, 2013 မှာ 5: 08 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 31, 2013 မှာ 4: 37 ညနေ
ကောင်းတဲ့ app များကို။
ငါ appapk.com ကြိုက်တယ်
စက်တင်ဘာလ 18, 2013 မှာ 11: 02 နံနက်
ဒီ site ကအရမ်းအသုံးဝင်သည်
ဇွန်လ 18, 2013 မှာ 10: 44 ညနေ
ဤနေရာတွင်အကောင်းဆုံး apps များ